प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपि शर्मा वलीको राजिनामा माग्ने बेला भएकै हो त ? « Post Khabar
Published on: 8 August, 2020 3:06 pm
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित १६ स्थायि कमिटि सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टि अध्यक्ष केपि वलिको राजिनामा मागे । यो कस्तो अवस्था हो राजिनामा माग्ने बेला भयकै हो त ?
कोरोनाको महामारीले देश आक्रान्त छ । बाढि पहिरोले देशका हजारौँ सख्यांमा नागरिक तितरबितर छन सयौको ज्यान गयो । देशमा कोरोना बिरामीका खातिर सुरक्षित क्वारेन्टाइन, आइसोलोसन र भ्यान्टिलेटर खाँचो छ । त्यहि अवस्थामा पार्टि नेतृत्व पदिय भागवण्डा लिएरै गुटे भेला, पत्रकार सम्मेलन र गोष्ठी गर्दैछन । अलिकति पनि कम्युनिस्ट आचरण देखाउन सक्दैनन भने यो पदिय लुछाचुँडी किन?
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादि केन्द्रको एकिकरण पश्चात बनेको नेकपा अब फुट को सघारमा छ । अझ झलनाथ खनाल र प्रचण्डको भाषामा त पार्टि फुटिसकेको छ औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाकी छ । पार्टि किन र कस्का लागि फुट्दैछ , पार्टि फुटे के हुन्छ ? कस्लाइ फाइदा हुन्छ ? यि प्रश्न जिवित छन तर उत्तर मुर्दाघरमा पनि छैन ।
सरकार यति बेला कोरोना महामारीका विरुद्ध र बाढि पिडितलाई व्यवस्थापन र उद्घार गर्न ब्यस्त छ । देशका बिभिन्न जिल्लामा कोरोनापरिक्षण गर्न थालिसकिएको छ । अन्य मुलुक भन्दा हाम्रो देशमा जनसङ्ख्याको आधारलाई मान्ने हो भने कोरोना परिक्षण उच्च छ यो सरकारको सफलता हो ।
त्यस्तै बाढि पहिरो नियन्त्रणमा पनि सरकार को दरिलो उपस्थिति छ, यो पनि सरकार को सफलता हो । यहि कामलाई कसले सपोर्ट गर्नु पर्ने थियो ? पार्टि केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म दुवै अध्यक्ष र नेताहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा संबेदनसिल तवरले सरकारलाई सघाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पार्टि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री माथि शत्रुको ब्यवहार देखाउने आफ्नै पार्टिका विवेकहिन नेताहरूलाई आमजनता ले कसरि लिन्छन यो त भबिस्यले जनाउने छ ।
गोयबल्स शैलिमा प्रस्तुत प्रचण्ड ,माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाइ आखिर के का लागि राजिनामा दिने त , राजिनामा दिए विकल्प के त ? प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिदाँ कुन अनुहार प्रस्तावित छ त , प्रचण्ड ? कदापि हैनन ! दुई पटक प्रधानमन्त्री को कुर्सिमा बसिसकेका प्रचण्ड ले के नयाँ दिएका थिए र अब के दिन्छन ? माधवकुमार नेपाल पनि एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए के नयाँ दिए र ?